साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनकाे दाेस्राे त्रैमासिक नाफा ५% ले वृद्धि भएकाे विवरण सार्वजनिक । | हजुरकाे पाेष्ट साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनकाे दाेस्राे त्रैमासिक नाफा ५% ले वृद्धि भएकाे विवरण सार्वजनिक । | हजुरकाे पाेष्ट
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनकाे दाेस्राे त्रैमासिक नाफा ५% ले वृद्धि भएकाे विवरण सार्वजनिक ।
जेठ २३, काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास सम्मको वित्तीय विवरण बल्ल सार्वजनिक गरेको छ ।
तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने अवधि समेत समाप्त भइसकेको अवस्थामा यस कम्पनीले भने दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
जेठ २२ गते सार्वजनिक कम्पनीको वित्तीय विवरण अनुसार गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको खुद नाफा ५ दशमलव ४७ प्रतिशत बढेको छ । गत वर्ष यस अवधिसम्म रू. २ करोड ३९ लाख ८६ हजार खुद नाफा गरेको कम्पनीले यस वर्ष भने रू. २ करोड ५२ लाख ९९ हजार खुद नाफा गरेको हो ।
यस वर्ष कम्पनीको आम्दानी २५ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष रू. ४ अर्ब ७० करोड आम्दानी गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. ५ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६७ हजार आम्दानी गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १९ करोड २० लाख २४ हजार रहेको छ । यस वर्ष २५ प्रतिशत बोनस शेयर मार्फत कम्पनीले चुक्तापूँजी बढाएको हो ।
कम्पनीको जगेडा कोष रकम गत वर्षभन्दा शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत बढेर रू. १ अर्ब ३१ करोड ४७ लाख १९ हजार कायम भएको छ । कम्पनीको कुल सम्पत्ति रू. ९ अर्ब ३५ करोड ८९ लाख ५५ हजार रहेको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको कुल सम्पत्ति ६ दशमलव ४७ प्रतिशतले बढेको हो ।
गत वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीको कुल सम्पत्ति रू. ८ अर्ब ७८ करोड ९८ लाख ६९ हजार थियो । कम्पनीको चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर आम्दानी वार्षिक रू. २६ दशमलव ३५ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ४१४ दशमलव ९० रहेको छ ।